५८ विदेशी पाइलटले उडाउँछन् नेपालमा विमान, कुन एयरलाइन्समा कति?
नेपाल लाइभ | २०७५ फागुन २६ आइतबार | Sunday, March 10, 2019 ११:२६:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं- नेपाली वायुयान कम्पनीका विमान तथा हेलिकोप्टर उडानमा ५८ जना विदेशी पाइलट रहेका छन्। तर, पनि अझै विमान कम्पनीले आवश्यकताअनुसार पाइलट पाउन सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी पाइलट अभावको समस्या नेपाल वायु सेवा निगमले खेप्दै आएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा विदेशी पाइलटकाे लाइसेन्स भएका ५८ जनाले विमान उडाइरहेका छन्। नेपाली लाइसेन्स भएका १४ जना पाइलटले विदेशी कम्पनीका विमान तथा हेलिकोप्टर उडान गर्दै आएका छन्।
नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी पाइलट तथा को–पाइलट भएको एयरलाइन्स कम्पनी हिमालय एयरलाइन्स हो। हिमालय एयरलाइन्समा २२ जना पाइलट छन्। हिमालय एयरलाइन्स नेपाली व्यवसायी र तीब्बतको संयुक्त लगानी भएको कम्पनी हो।
यसैगरी, धेरै विदेशी लाइसेन्सधारी पाइलट भएकाे विमान कम्पनीकाे दाेस्राे नम्बरमा नेपाल एयरलाइन्स पर्छ। नेपाल एयरलाइन्समा १४ जना पाइलट रहेका छन्।
यसैगरी बुद्ध एयरमा १, समिट एयरलाइन्समा १, मकालु एयरमा २, एयर डाइनेष्टीमा ३, अल्टिच्युडमा १, हेली एभरेस्टमा १, कैलाश हेलिकोप्टरमा १, माउन्टेन हेलिकोप्टरमा १, प्रभु हेलिकोप्टरमा ४, श्री हेलिकोप्टरमा २, सिम्रिक हेलिकोप्टरमा ३ र समिट हेलिकोप्टरमा १ जना विदेशी लाइसेन्सधारी पाइलट छन्।
नेपाली पाइलट र को-पाइलट कति?
अहिले नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्ससहित २२ वटा विमान तथा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी विमान भएको एयरलाइन्स कम्पनी नेपाल एयरलाइन्स नै हो। नेपाल एयरलाइन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा वाइड बडी, २ वटा न्यारो बडी, एक बोइङ र आन्तरिक उडानका लागि ४ वटा वाई-१२, २ वटा एमए-६०, ३ वटा टिवनअटर रहेको छ।
यी विमान उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्समा ५३ जना नेपाली पाइलट र २२ जना को–पाइलट रहेकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ।
यसैगरी हिमालयमा १० जना पाइलट र १० जना को–पाइलट रहेका छन्। यस्तैगरी, आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्न सफल बुद्ध एयरलाइन्सका ११ वटा जहाज उडानमा ४२ पाइलट र ३१ को-पाइलट छन्।
यसैगरी यतिमा ३६ पाइलट र १३ को–पाइलट, तारामा २१ पाइलट र १४ को–पाइलट, श्री एयरलाइन्समा ११ पाइटल र १३ को–पाइलट, सितामा ७ पाइलट र ६ को–पाइलटले उडान भरिरहेका छन्।
समिटमा ७ पाइलट र ६ को–पाइलट, मकालुमा १ पाइलट र २ को–पाइलट, सिम्रिकमा ४ पाइलट र २ को–पाइलट, सौर्यमा ३ पाइलट र २ को–पाइलटले जहाज उडान गरिरहेको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी विभिन्न कम्पनीको हेलिकोप्टर उडानमा ८ जना पाइलट र ३१ जना को–पाइलट नेपाली रहेका छन्। सबै कम्पनीमा कार्यरत गरी २ सय १७ जना पाइलट र १ सय ५२ जना को–पाइलट नेपाली रहेका छन्।